WOLF DOG BREED HYBRID, 1 - ALIKA
Wolf Dog Breed Hybrid, 1
Wolf / Hazofijaliana alika an-trano
Harley dia Husky 25% ary amboadia 75%. Tena marani-tsaina izy ary hainy ny mipetraka, mihifikifi, mandry ary manome dimy ambony. Izy dia aseho eto amin'ny 8 volana.
Hatramin'ny taona 1990, ny teny mety amin'ny fifangaroan'ny amboadia sy ny alika dia 'wolfdog.' Ny alika dia navarina ho karazana sokajy amboadia (canis lupus familiaris) ary noho izany dia tsy azo atao ny misy hybrid satria karazany roa izy ireo. Na dia tsy marina aza ny lafiny teknika, ny teny hoe 'hybrid' dia mbola ampiasain'ny maro, indrindra raha ny amin'ny fampifangaroana alika an-trano roa madio.
Nampahatsiahy anay ny mpanafika wolfdog sasany fa misy biby maro any izay voalaza fa amboadia, fa raha ny marina Alika karazana avaratra mifangaro. Toa misy ny sary ao anatin'ity fizarana ity. Nanapa-kevitra izahay fa hitazona ity fizarana hybrid amboadia ity ho fampitahana amin'ireo alika efa voaporofo amboadia marina . Afaka mahita ohatra vitsivitsy ianao ao amin'ny Non-Wolfdogs: Identity diso .
sarin'alika alika kely labrador
Ny Dog Breed Info Center® dia tsy mitaky ny alika amin'ity fizarana ity fa tsy amboadia marina. Tianay ianao mba hanao fampitahana anao manokana amin'ity fizarana hybrid amboadia ity sy ilay voaporofo amboadia fizarana . Betsaka ny alika ao amin'ny toeram-pialofana novonoina satria toy ny amboadia izy ireo nefa alika karazana Nordic, toy ny fangaro Husky na Malamute. Fametahana soratra diso amin'ny biby amboadia any amin'ny fialofana dia mety hanimba. Ny alika Nordic dia vonoina ary ny amboadia dia tsy handeha hamonjy azy ireo izay misy olona mahalala ny fomba hitondrana azy ireo.
Harley the Wolf Hybrid amin'ny maha alika kely azy
Lakota amin'ny faha-2 taona - hybrid Timber Wolf sy Siberian Husky 50/50.
'Ity dia Shadow amin'ny 2 taona. Tiany ny mihazakazaka sy milalao. Tsy mifanena amin'ny olon-tsy fantatra izy. Izy dia 40% Wolf Wolf ary 60% Norkho Elkhound . Matahotra ny oram-baratra i Shadow dia hidradradradra toy ny adala izy rehefa manomboka ny oram-baratra. Mijanona eo ivelany izy manana be dia be ary ity trano ity dia mandray ny lafiny iray amin'ny antsapaka. Antsoinay hoe ny condo-ny. Karleigh, ny zanakay vavy kely dia hanana amboadia eran'ny trano raha azony atao. Mahagaga ny olona fotsiny ny filazany azy fa manana amboadia ho an'ny biby izy. '
Harley the Wolf Hybrid mandritra ny 8 volana
alikakely feiste amidy
Alika mifangaro amboadia Wolf Hybrid.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Wolf Hybrid
Wolf Hybrid sary 1
Wolf Hybrid sary 2
sary sy sary alika an-tendrombohitra bernese
basset hound fifangaroan'ny volamena
voalavo fotsy sy fotsy
laboratoara pitbull mifangaro sary alika kely
st Bernard sy fifangaroan'ny retriever volamena
afangaro lhasa apso sy bichon
alika mifangaro chow sy retriever volamena